Teny malagasy : mila ny fanampian’ny fanjakana ny fampiroboroboana azy | NewsMada
Teny malagasy : mila ny fanampian’ny fanjakana ny fampiroboroboana azy
Par Taratra sur 02/06/2016
Nosantarina, omaly teny amin’ny Akademia malagasy eny Tsimbazaza, ny « Iray volan’ny teny malagasy ». Nisongadina ny ezaka natao sy hataon’ireo akademisianina amin’ny fanabeazamboho ity tenindrazantsika ity. Efa nanao dingana ihany koa ny fanjakana saingy mbola andrandraina ny fanampiany ho fanatrarana ny tanjona : ny hampaharitra ny teny malagasy.
114 taona ny Akademia malagasy, andry lehibe amin’ny fampiroboroboana ny teny malagasy. Tao anatin’ny 100 taona voalohany nisiany, namoaka boky iray isan-taona izy, ankoatra ny asa fikarohana sy ny maro hafa. Nitombo avo telo heny izany teo anelanelan’ny 2001 sy 2015. Na izany aza, iaraha-manaiky fa tsy vitsy ny Malagasy tsy mahafehy ny tenin-drazany.
Miombon-kevitra amin’izany ny filoham-pirenena. « Tsy mora ny mampiasa ny teny malagasy ranoiray… Misy ny olana ho anay mpitondra. Tsy maintsy atao izay ahazoan’ny olona ny resaka tiana hampitaina », hoy izy. Manoloana izany, efa voavolavolan’ny fanjakana ny lalàna mikasika ny politikam-pirenena momba ny teny malagasy.
Nanambara ny avy amin’ny Akademia malagasy fa vonona izy ireo hanohy ny asa famokarana Rakibolana. Efa lany ny natonta teo aloha ary ilaina koa ny mamokatra vaovao, tokony hifanaraka amin’ny fivoarana ankehitriny. Mangataka ny fanohanan’ny fanjakana izy ireo amin’ny fanatontosana izany.
Ho setrin’izany, nampanantena ny filoha fa handroso haingana ilay volavolan-dalàna mikasika ny politikam-pirenena momba ny teny malagasy eo anivon’ny Antenimierampirenena, izay handinika sy handany izany na tsia. Namporisika ny tompon’andraiki-panjakana sy ny Malagasy rehetra koa izy mba hiezaka hampiasa ny teny malagasy tsy mifangaro.
Marihina fa niara-dalana tamin’ity fanokafana ny « Iray volan’ny teny malagasy » ity ny fanohizana ny fanamarihana ny faha-150 taon’ny gazety malagasy.